CarsDB Website ကို MPT နှင့်အသုံးပြုပါက Data ဖိုးမကုန်ဘဲ ... | CarsDB
CarsDB Website ကို MPT နှင့်အသုံးပြုပါက Data...
CarsDB Website ကို MPT နှင့်အသုံးပြုပါက Data ဖိုးမကုန်ဘဲ အရောင်းတင်ထားသည့် ကားများကို အခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်
မြန်မာပြည်၏ နံပါတ် ၁ ကားအရောင်းအဝယ် ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်သော CarsDB ကို အသုံးပြုပြီး အရောင်းတင်ထားသော ကားများကိုကြည့်ရှုလေ့လာသူများအတွက် MPT အင်တာနက်လိုင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက Data ဖိုးမကုန်ဘဲ အခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ကြောင်း သတင်း ကောင်းပါး လိုက်ပါသည်။
Data ဖိုးမကုန်ဘဲ CarsDB website ကိုကြည့်ရှုရန် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ -
1. ပထမဆုံး Browser ထဲတွင် 0.freebasics.com ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
2. ထို့နောက်ပေါ်လာသည့် စာမျက်နှာ၏ အောက်ဆုံးတွင် ရှိသော Add more free services ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
3. နောက်ထပ် Search box တစ်ခုပေါ်လာလျှင် CarsDB ဟုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
4. CarsDB ပေါ်လာလျှင် အပေါင်းလက္ခဏာ (+) လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
5. CarsDB.com ကို သင်၏ free Service တွေထဲထည့်မလားဟုမေးသည့် စာမျက်နှာ တစ်ခု ပေါ်လာသောအခါ အောက်တွင်ပါလာသော ADD ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
6. ထိုအခါတွငိ CarsDB တွင် အရောင်းတင်ထားသော Premium Dealer များ၏ ကားများ၊ Premium ကားများ နှင့် လက်တလော အရောင်းတင်ထားသော ကားများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် မိမိကြိုက်သည့်ကားတစ်စီးချင်းစီ၏ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပါ Data ဖိုးမကုန်ဘဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မွနျမာပွညျ၏ နံပါတျ ၁ ကားအရောငျးအဝယျ ဝကျဆိုဒျဖွဈသော CarsDB ကို အသုံးပွုပွီး အရောငျးတငျထားသော ကားမြားကိုကွညျ့ရှုလလေ့ာသူမြားအတှကျ MPT အငျတာနကျလိုငျးဖွငျ့ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုပါက Data ဖိုးမကုနျဘဲ အခမဲ့ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျမညျကွောငျး သတငျး ကောငျးပါး လိုကျပါသညျ။
Data ဖိုးမကုနျဘဲ CarsDB website ကိုကွညျ့ရှုရနျ ပွုလုပျပုံအဆငျ့ဆငျ့မှာ -
1. ပထမဆုံး Browser ထဲတှငျ 0.freebasics.com ကိုရိုကျထညျ့လိုကျပါ။
2. ထို့နောကျပျေါလာသညျ့ စာမကျြနှာ၏ အောကျဆုံးတှငျ ရှိသော Add more free services ကို နှိပျလိုကျပါ။
3. နောကျထပျ Search box တဈခုပျေါလာလြှငျ CarsDB ဟုရိုကျထညျ့လိုကျပါ။
4. CarsDB ပျေါလာလြှငျ အပေါငျးလက်ခဏာ (+) လေးကို နှိပျလိုကျပါ။
5. CarsDB.com ကို သငျ၏ free Service တှထေဲထညျ့မလားဟုမေးသညျ့ စာမကျြနှာ တဈခု ပျေါလာသောအခါ အောကျတှငျပါလာသော ADD ကို နှိပျလိုကျပါ။
6. ထိုအခါတှငိ CarsDB တှငျ အရောငျးတငျထားသော Premium Dealer မြား၏ ကားမြား၊ Premium ကားမြား နှငျ့ လကျတလော အရောငျးတငျထားသော ကားမြားကိုဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျသညျ့အပွငျ မိမိကွိုကျသညျ့ကားတဈစီးခငျြးစီ၏ဆကျသှယျရမညျ့ ဖုနျးနံပါတျမြားနှငျ့ အခွားအသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကိုပါ Data ဖိုးမကုနျဘဲ အခမဲ့ ကွညျ့ရှုနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။
Posted at: 29-09-2016 10:22 AM